दोस्रो सातामा पुग्दा ‘कायरा’को कमाई कति ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV दोस्रो सातामा पुग्दा ‘कायरा’को कमाई कति ? | Sagarmatha TV
दोस्रो सातामा पुग्दा ‘कायरा’को कमाई कति ?
काठमाडौं । दोस्रो सातामा प्रदर्शनरत चलचित्र कायराले पहिलो सातामा एक करोड बढीको कारोबार गरेको छ । निर्माण पक्षको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने चलचित्र कायराले पहिलो एक साताको अवधिमा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको हो ।
अभिनेता आर्यन सिग्देल तथा साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह अभिनित फिल्म कायराले यो वर्ष रिलिज भएका अन्य फिल्मको लाईफटाईम कलेक्सनलाई पछि पार्दै १ करोड ६२ लाख ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण पक्षको दाबी छ । पहिलो दुई दिनमा ९५ लाख प्लस ग्रस कलेक्सन गरेको फिल्मले गत आइतबार अल नेपाल १६ लाख, सोमबार १८ लाख, मंगलबार १३ लाख, बुधबार ११ लाख र बिहिबार ९ लाख कलेक्सन गरेको थियो ।
सात दिनको हिसाव जोड्दा कायराको कूल कलेक्सन १ करोड ६२ लाख हुन आउँछ । जसमा राजधानीबाट ९२ लाख र मोफसलको ७० लाख छ । यो बर्ष सवैभन्दा बढी कोहलपुर एक्सप्रेसले १ करोड ३३ लाख कलेक्सन गरेको थियो । डमरुको डन्डीवियोले १ करोड २८ लाख, सुनकेसरीले १ करोड २७ लाख र बबीले १ करोड कारोबार पार गरेको छ । त्यस्तै अर्को चलचित्र भैरेले पनि १ करोड नजिकको कारोबार गरेको बुझिएको छ ।
आर्यन सिग्देल इन्टरटेन्मेन्ट र आर एन्ड आर प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘कायरा’मा मुख्य कलाकारहरु नायक आर्यन सिग्देल र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीको प्रेम, विछोडलाई देखाइएको छ । म्यूजिकल लभ स्टोरी कथामा निर्माण भएको यो चलचित्रलाई लक्ष्मण रिजालले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा आर्यन र साम्राज्ञीको साथमा शिशिर राणा, हितेश शर्मा, सुरेश न्यौपाने, मरिषा श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
चलचित्रमा कोशिश क्षेत्री, अर्जुन पोखरेल र कल्याण सिंहको संगीत, प्रविण सिंहको कोरियोग्राफी, शिवराम श्रेष्ठको छायांकन, केदार भुषालको पटकथा तथा संवाद, बनिष शाह र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन छ । चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन फिलिपिन्समा गरिएको छ । फिलिपिन्सका दृश्य, आर्यन र साम्राज्ञीको केमेष्ट्री, गीतसंगीतले चलचित्र उत्कृष्ट बनेको बनेको छ ।
यसैबीच, चलचित्र दोस्रो सातामा प्रवेश गर्दा निर्माण पक्षले चलचित्रको केही भाग छोट्याएर हलमा प्रदर्शनमा ल्याएको छ । दर्शकले चलचित्र ‘स्लो’ र ‘लेन्दी’ भएको गुनासो गरेपछि छोटाएर प्रदर्शनमा ल्याइएको आर्यनले बताए । आर्यनले दर्शकलाई फ्ल्यास ब्याक बुझ्न गाह्रो भएको बताए ।
आर्यन अहिले दुवईमा रहेका छन् । चलचित्रको प्रदर्शनमा केही दिन पहिले अभिनेत्री साम्राज्ञीसहित उनी दुवई उडेका हुन् । २ घण्टा २१ मिनेटको चलचित्र अब छोटाएर २ घण्टा ५ मिनेटमा झारिएको निर्देशक लक्ष्मण रिझालले जानकारी दिए । घरेलू बजारमा सुखद कलेक्सन गरिरहेको फिल्मले नेपालसँगै विदेश प्रदर्शन पनि आरम्भ गरेको छ ।
९ अगस्टदेखि दुवईका विभिन्न शहरमा यो फिल्म प्रदर्शन आएको छ । फिल्म हेरेका दर्शकले आर्यन–साम्राज्ञीको केमेस्ट्री, फ्रेमिङ, लोकेशन, छायांकन र डाइलगको भने प्रशंसा गरेका छन् ।